Miaramila mpanao fanafihana: votsotra ilay serzà, nidoboka ny ambany girady | NewsMada
Niakatra teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana tao Toamasina, ny asabotsy teo, ny raharaha nahavoarohirohy miaramila, voampanga ho nanao fanafihana mitam-piadiana. Anisan’izany ny miaramila serzà iray, izay navotsotra, raha naiditra am-ponja vonjimaika kosa ny miaramila ambany kilasy faharoa.
Ny asabotsy 10 novambra teo, niakatra teny amin’ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina ny raharaha nahavoarohirohy miaramila roa, ka votsotra ilay serzà sy ny vadiny raha naiditra vonjimaika am-ponja kosa ny kilasy faharoa. Ny alakamisy ho avy izao no miverina eny amin’ny mpitsara mpanao fanadihadiana ny mpitory ny voampanga.
Tany Toamasina miaramila mpiambina mangazay ana Karana ihany ny namaky sy nangalatra ny entana tao ka tratran’ny vela-pandriky ny polisy. Raha iverenana, nitrangana fanafihana mitam-piadina ny tokantranona mpandraharaha iray amin’ny fampiasana tambanjotram-pifandrasaina mivarotra
fahana sy manao ireny fifanakalozana vola ireny, tany Ambohijafy, ny alin’ny 2 novambra lasa teo. Very tamin’izany ny moto iray sy fahana mitotaly 3 tapitrisa Ar ary lelavola 4 tapitrisa Ar. “Roa lahy izy ireo ny niditra ny tokantranonay, tokony ho tamin’ny 8 ora alina, ka nanambana avy hatrany basy ahy ny iray ary tsy afa-nihetsika aho. Tsy nanao saron-tava kosa ny iray tamin’io ary nandroaka ny fahana sy ny vola rehetra ary efa dify ireo vao afaka niantso ny polisy aho”, hoy ny niharam-boina. Tonga ara-potoana ny polisy ary nifanenjika tamin’ireo jiolahy tany Ambalamanasy niaraka tamin’ny moton’ny voatafika sy ny moto iray efa nentin’ ireo mpanafika ireo. Tsy nisy tratra anefa ireo olon-dratsy.
Nampangain’ny varotra fahana
Taorin’ny fahaverezana fahana tao amin’ilay mpandraharaha, nametraka fitoriana teny amin’ny foiben’ny tambajotra nisy ny fahana very izy ka tsy azo nampiasaina avokoa izay fahana very tao aminy. Tetsy ankilan’ izay kosa, maro ny olona nividy fahana tao Ampilaolava ary mampiditra izany amin’ny findainy, saingy tsy tafiditra ka niseho teo ny nafenina.
Nampilaza amin’ny polisy ilay niharam-boina raha vao nahare fa misy fahana amidy nefa tsy tafiditra. Nidina ifotony ny polisy niaraka tamin’ny voatafika ka tratra ireo nivarotra. Vadina serzà amin’ny tafika io. Ity farany izay nilaza fa miaramila kilasy faharoa naman’ny vadiny ny nanatitra ireo taminy.
Voasambotra ny miaramila roa ary olon-tsotra roa ihany koa. Nandritra ny famotorana, nanamafy ilay niharam-boina fa io hitany maso io ilay nanambana basy azy. Nanondro ilay serzà ilay voatafika. Tsy nitohy teo anefa ny famotorana nataon’ny polisy fa noho ny “protocole d’ accord” eo amin’ny samy mpitandro filaminana, nafindra teny anivon’ny zandary ny famotorana ireo tafika roa lahy.